PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-10-14 - Indida kwabelwa iKZN Music House imali
Indida kwabelwa iKZN Music House imali
Isolezwe ngeSonto - 2018-10-14 - IZINDABA - THOKOZANI NDLOVU
SEKUQUBUKE indida ngemali eyabelwe isikhungo sezobuciko esivaliwe iKZN Music House, wuMnyango wezobuCiko namaSiko KwaZulu-Natal.
IKZN Music House yabelwe u-R8.5 million kwisabelo mali sika-2018 / 2019.
Lokhu kuvela kwisabelo mali somnyango esethulwe wuNgqongqoshe, uNkk Bongiwe Sithole-Moloi ngoMeyi nonyaka.
Kwisabelo mali, ungqongqoshe uveze ukuthi useqoke umlawuli wesikhashana ozobheka konke okwenzeka eKZN Music House ukuqinisekisa ukuthi yonke into yenziwa ngendlela kuyona. Uveze ukuthi umnyango usebenzisana nalo mlawuli ukuqinisekisa ukuthi yonke into ihanjiswa kahle nokuhlahla indlela yokusebenza kwesikhungo, wase ephetha ngokuthi wabe u-R8.5 million oqondene nesikhungo wonyaka wezimali u-2018 / 2019.
Enkulumweni yakhe akacacisanga ukuthi lokhu kuzokwenzeka kanjani nokuthi sizoqala nini ukusebenza njengoba kunemali eyabelwe sona.
Isikhulu esiphezulu eMnyangweni wezobuCiko namaSiko KwaZulu-Natal, uMnuz Ntokozo Chonco, sithe imali eyabelwe isikhungo izosetshenziselwa ukuthenga impahla nemisebenzi eqhubekayo.
“Ngo-R8.6 million owabelwe iKZN Music House, asisho ukuthi uzosetshenziswa ezintweni eziqondene nayo kodwa ungenza eminye imisebenzi,” kusho uChonco.
Uphinde waveza nokuthi uphenyo ngalesi sikhungo luhlukene kabili. Olokuqala obelenziwa yihhovisi likamgcinimafa esifundazweni seluphothuliwe, kuthi olwesibili kube olwamaphoyisa olungakaphothulwa njengoba kunecala lobugebengu elivulwe emaphoyiseni ngonyaka odlule.
Njengoba kuvela umlawuli wesikhashana oqokwe wumnyango kulesi sikhungo, uChonco, uthe umuntu abamqokile, uMnuz MJ Moloi ongumsebenzi woMnyango wezobuCiko namaSiko esifundazweni, njengoba engumqondisi khona.
Lesi sikhungo sasungulwa ngo-2009 ngenhloso yokusiza abaculi baKwaZulu-Natal ukuthi bangashiyi isifundazwe ukuyozama amadlelo aluhlaza kwezinye izifundazwe.